बुवा मा’र्ने आफ्नी आमाको माया लाग्छ कि लाग्दैन..? – Dainik Sangalo
बुवा मा’र्ने आफ्नी आमाको माया लाग्छ कि लाग्दैन..?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २१, २०७८ समय: १३:३१:०१
असोज ११ गते बिहान साढे सात बजे तिर ललितपुर को गोदावरी नगरपालिका ७ देबि चौर स्थित काफाङ भन्ने ठाउँको खो’ल्सामा एउटा श’व फे’ला पर्यो । उक्त श’व ललितपुर जिल्ला बागमति गाउपालिका ४ का राजकुमार घुलुङको हो भन्ने पत्ता लाग्यो ।
उनी केही महिना अघिबाट देबिचौरमा परिवार सगैँ बस्दै आएका थिए । राजकुमार घर बनाउने ठेकेदार तथा मिस्त्री काम गर्दै आएको खुलेको छ । करिब ३ महिना अगाडि देखि देबिचौर आएका राजकुमार उनकै साडुभाईको घरमा बस्दै आएका थिए ।
राजकुमारलाई उनकै श्रीमतीको यो’जनामा ह’त्या भएको खुले पछि ह’त्यामा संल’ग्नलाई अहिले प्र’हरीले प’क्राउ गरि थु’नामा राखेको छ । राजकुमारको ह’त्यामा सं’लग्न भए पछि उनकी श्रीमती पनि थु’नामा रहेपछी अहिले उनका छोराछोरीको बि’चल्ली भएको छ ।
उनीहरुलाई कस्ले राख्ने भन्ने कुरा चलिरहेको अव’स्थामा अहिले उनकै एक आफन्तले राख्दै आएकी छिन । उनिहरुलाई राख्दै आएकी ती महिलाका अनुसार आफू पनि भाडामा बस्दै ज्याला मजदुरी गरि खाने गरेकोले जसो तसो खान बस्न दिएता पनि उनिहरुलाई पढाउन भने स’मस्या हुने बताएकी छिन ।
राजकुमारकि श्रीमतीले राजकुमारले जा’डँर’क्सी खाएर आफुलाई सधै कु’टपि’ट गर्ने गरेकोले आफुले ह’त्या योजना बनाएको प्रह’री समक्ष ब’यान दिएकी थिइन । तर उनकी जेठी छोरिले भने राजकुमार कहिले काहीँ र’क्सी खाएर आएता पनि कहिल्यै कु’ट’पि’ट नगरेको बताएकी छिन ।
बाबा र’क्सी खाएर आएता पनि कहिल्यै धेरै नबोल्ने गरेको तर आमाले भने धेरै गा’ली गर्ने, झ’गडा गर्ने गरेकी ती छोरिले बताएकी छिन । आमाले भने जस्तो बाबाले कहिले नगरेको उनले बताईन । बरु आमाले नै उल्टै गा’ली गर्ने झ’गडा गर्ने गरेको उनले बताएकी छिन ।
प्र’हरिको प्रारम्भिक बया”नमा राजकुमारका साडुभाईले आफू र राजकुमार सगै घर गै रहेको अव”स्थामा मु’ख छो”पेको एक ब्याक्तिले खु”कुरी झि’केर प्र’हार गरेको बताए । आफू त्यहाबाट भा’ग्न सफल भए पनि राजकुमारलाई चो’ट लागेकोले उनी भा’ग्न नसकेको उनले घट”नास्थलमै प्रारम्भिक ब”यान दिएका थिए ।
उनको उक्त ब’यान आए पछि प्रह”रीले उनलाई तत्काल निय”न्त्रणमा लिएको थियो । जसका कारण पनि अनु”सन्धानमा सजिलो भएको प्रह”रीले जनाएको छ । उनलाई निय’न्त्रणमा लिएर थप अनु”सन्धान गर्दै जादाँ राजकुमार कै श्रीमती ह”त्याको मुख्य यो’जनाकार भएको खुल्न आएको प्र”हरिले बताएको छ ।
श्रीमतिको योज”नामा उनका साडुभाई र साली सुनिताको सहयोग भएको अनु”सन्धानले देखाएको छ । घट”नामा अन्य मकवानपुरकि हाल गोदवारी १२ बस्ने २४ वर्षीय लक्ष्मी लुङबाङ्ग र उदयपुर घर भएका हाल गोदवारी ११ बस्ने २८ वर्षका मनोज मगर भन्ने मनोज सार्की पनि सं’लग्न भएको खु’ल्न आएको छ । तर्क मनोज भने फ’रार भएको प्र”हरीले जनाएको थियो ।
अहिले प्र”हरीले ४ जनलाई निय”न्त्रणमा लिएको छ भने मनोजलाई फ’रारको सुचीमा राखेर अन्य ब्याक्तीको पनि सं’लग्न भएको छ कि भनेर सुक्ष्म अ’नुसन्धान गरिरहेको जनाएको थियो । मनोजले नै घाँ”टी रे’टेको हुन सक्ने स्थानियको अनुमान छ ।
तर भोलिपल्ट मनोज सार्किको पनि राजकुमारजै श’व भेटिएको स्थान भन्दा केही तल भि’र मुनि श’व भेटिएको छ । उनी राजकुमारको ह”त्या गरि भा’ग्दै गर्दा ल’डेर मृ’त्यु भएको हो कि कसैले ह”त्या गरेको हो भन्ने बारे प्र”हरीले अनु’सन्धान गरिरहेको छ ।
ह’त्या आफुले गरेको हो भनेर राजकुमारकि श्रीमतिले प्रह’री समक्ष ब’यान दिएकी छिन । राजकुमारले सधै जा’डरक्’सी खाएर आए आफुलाई कु’टपि’ट गर्ने गरेकोले आफुले ह’त्या गरेको उनले ब’यान दिएकी छिन ।
तर राजकुमार सगैँ काम गर्ने अन्य ब्याक्तिहरुले भने दिनभर ढुङ्गा माटोको काम गर्ने गरेको गलेको बेला बेलुका अलिअली खाएता पनि त्यसरी मा’तेर झै झ’गडा गर्ने गरि धेरै खाएको आफुहरुले कहिल्यै नदेखेको बताएका छन । उनी धेरै मेहेनत गर्ने र उनकी श्रीमतिले भने अनुसार धेरै र’क्सी खाएर कहिल्यै हिडेको आफुहरुले नदेखेको बताएका छन ।
यसैबिच राजकुमारका भाईले भने राजकुमारकि श्रीमतिले लगाएको आ’रोपहरु सबै झु’टो भएको बताएका छन । साथै ह’त्या गर्नुको कारण अरु नै भएको र ह’त्यामा अरु पनि थुप्रै सं’लग्न भएको हुनसक्ने उनले बताएका छन ।
आफू उनिहरु समक्ष प्र’हरी हिरा’सतमा जादाँ राजकुमारकि श्रीमतिले तामाङ भाषामा मकवानपुरकि लक्ष्मी लगायतलाई `तिमिहरुलाई ब’चाउन पनि मैले झु’ट त बोल्नै पर्यो नि´ भन्दै कुरा गरेको सुनेको बताए । यसैले पनि ह’त्या अन्य का’रण र ब्याक्तिहरुको सं’लग्न भएको बुझ्न सकिने उनले बताए । साथै ह’त्यामा राजकुमारकि जेठी सासू लगायतको सं’लग्न भएको आशं’कामा प्रह’रीले अनु’सन्धान गरिरहेको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
Last Updated on: October 7th, 2021 at 1:31 pm